यूनाइटेड मोदीको आइपीओमा पहिलो दिन नै ३९ करोडको आवेदन
काठमाण्डौ । यूनाइेट मोदी हाइडोपावरले निश्कासन गरेको आइपीओमा परम्परागत विधिबाट मात्रै पहिलो दिनमा ७ हजार ५ सय आवेदनबाट ३९ करोडको प्रस्ताव परेको छ । १७ करोड २५ लाख मूल्यको १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ पहिलो दिन नै दुुई गुणा बढीले ओभरसस्क्राइब्ड भएको हो । बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमीटेडका एक...
हालसम्मकै ठूलो आइपीओ ल्याउँदै साउदीको तेल कम्पनी
काठमाण्डौ । साउदी अरबको स्वामित्व रहेको तेल कम्पनी ‘साउदी अराम’ले विश्व बजारमा आइपीओ जारी गर्न लागेको छ, यो आइपीओ हालसम्मको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आकारको हुने अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । योसँगै अराम कम्पनीले सन् २०१४ मा चीनको अलीबाबा कम्पनीले ल्याएको २.५६ लाख करोडको आइपीओको रेकर्डलाई तोड्नेछ । कम्पनीको...
३८ हजारले मात्र पाए फरवार्डको आइपीओ, ८६.७ हजार जिल्लिए
काठमाण्डौ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स बित्तीय संस्था लिमीटेडको ६ लाख कित्ता आइपीओको बाँडफाँड भएको छ । शुक्रबार काठमाण्डौको नक्सालस्थित नवील इन्भेष्टमेन्ट बैकिंग लिमीटेड परिसरमा दिउँसो २ः३० बजे आइपीओ बाँडफाँड गरिएको हो । न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम १ लाख ३ हजारसम्मको आवेदन दिएका लगानीकर्तामाझ चिठ्ठा विधि अपनाई सेयरको...
आजदेखि यूनाइटेड मोदीको आइपीओ, आस्वा र परम्परागत विधिबाटै आवेदन दिन सकिने
काठमाण्डौ । यूूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि आज(फागुुन १९ गते)देखि प्राथमिक सेयरको निश्कासन(आइपीओ) गरेको छ । यो जलविद्युत कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल १७ लाख २५ हजार कित्ता सेयर आइपीओ गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो जलविद्युत कम्पनीलाई माघ १९ गते सर्वसाधारणका लागि कुल १७ करोड २५ लाख मूल्य...
५.४ करोडको आइपीओ जारी गर्दै छ्याङ्दी हाइड्रोपावर
काठमाण्डौ । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमीटेडले समेत प्राथमिक सेयरको निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । यो कम्पनीको आइपीओ धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा समेटिएको हो । यो जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल ५ करोड ४० लाखको ५ लाख ४० हजार कित्ता सेयर आइपीओ गर्न लागेको हो । ग्लोबल आईएमई क्यापिटल...
भोलिदेखि यूनाइटेड मोदीको आइपीओ, कहाँबाट भर्ने आवेदन ?
काठमाण्डौ । यूूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि भोलिदेखि प्राथमिक सेयरको निश्कासन(आइपीओ) गर्दैछ । यो जलविद्युत कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल १७ लाख २५ हजार कित्ता सेयर आइपीओ गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो जलविद्युत कम्पनीलाई माघ १९ गते सर्वसाधारणका लागि कुल १७ करोड २५ लाख मूल्य बराबरको...
पर्सिदेखि यूनाइटेड मोदीको आइपीओ, कहाँबाट भर्ने आवेदन ?
काठमाण्डौ । यूूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि आगामी फागुन १९ गतेदेखि प्राथमिक सेयरको निश्कासन(आइपीओ) गर्दैछ । यो जलविद्युत कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल १७ लाख २५ हजार कित्ता सेयर आइपीओ गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो जलविद्युत कम्पनीलाई माघ १९ गते सर्वसाधारणका लागि कुल १७ करोड २५ लाख...
नेपाल लाइफ र फरवार्डको एफपीओ/आइपीओको बाँडफाँडको समय एकसाता थप
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफ्नै पूर्व कदमबाट पछि हटेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योेरेन्स र फरवार्ड माइक्रो फाइनान्सलाई फागुन १३ गतेभित्र आइपीओ र एफपीओको बाँडफाँड सक्न निर्देशन दिएको बोर्ड एक कदम पछि हट्दै एकसाताको समय थप गरेको हो । यसअघि नेपाल लाइफ र फरवार्डको एफपीओ आइपीओमा परेको रकम फ्रिज हुँदा तरलताको समस्या विकराल बनेको...
यूनाइटेड मोदीको आइपीओ कहाँ–कहाँबाट भर्ने ?
काठमाण्डौ । यूूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि आगामी फागुन १९ गतेदेखि प्राथमिक सेयरको निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । यो जलविद्युत कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल १७ लाख २५ हजार कित्ता सेयर आइपीओ गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो जलविद्युत कम्पनीलाई माघ १९ गते सर्वसाधारणका लागि कुल १७ करोड २५...
सगुनको आइपीओ भर्नु भो ? लगानीको अवसर छुटला नि !
काठमाण्डौ । नेपाली युवा गोविन्द गिरीद्वारा निर्मित सामाजिक सञ्जाल सगुन डटकमले सर्वसाधारणबाट २ करोड डलर बराबरको लगानी जुटाउने उद्देश्यले अनलाइनबाट आइपीओमा थामिनसक्नु गरी आवेदन परिरहेको छ । यो सामाजिक सञ्जालले फेब्रुुअरी ९ देखि संसारभर ८ लाख ६९ हजार ५ सय ६४ कित्ता प्राथमिक सेयर निश्कासन गरी त्यसमा अनलाइन आवेदन लिन सुरु गरेको हो...
सिनर्जी र समताको आइपीओ बाँडफाँड यही साताभित्र
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ र फरवार्ड माइक्रो फाइनान्सको एफपीओ आइपीओको बाँडफाँड फागुन १३ भित्र सक्न धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएपछि समता माइक्रो फाइनान्स र सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमीटेडको आइपीओ भरेका लगानीकर्ताहरुको एउटै जिज्ञासा थियो–‘समता र सिनर्जीको बाँडफाँड चाँडो टुुंग्याउने बिषयमा बोर्ड किन मौन बसेको ?’ अब लगानीकर्ताले...
यूनाइटेड मोदीलाई १७.२५ करोडको आइपीओ गर्न अनुमति
काठमाण्डौ । यूूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमीटेडले प्रस्ताव गरेको १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर आइपीओको अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो जलविद्युत कम्पनीलाई सर्वसाधारणका लागि एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल १७ लाख २५ हजार कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ)का लागि माघ १९ गते अनुमति दिएको हो । कम्पनीले आफ्ना...
यूनाइटेड मोदीको १७.२५ करोडको आइपीओ आउँदै
काठमाण्डौ । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमीटेडलाई १७ करोड २५ लाख मूल्यको १७ लाख २५ हजार कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्न धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ। यो कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निश्कासनको माग गर्दै आवेदन दिएको थियो । सो आवेदनको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी बोर्डले माघ १९ गते १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ निश्कासनको...
स्थानीयलाई १० करोड ६५ लाखको, सर्वसाधारणका लागि २१ करोड बढीको आइपीओ आउँदै
काठमाण्डौ । हिमालयन पावर पार्टनर लिमीटेडले सोमबार(आज)देखि आयोजना प्रभावित लमजुंग जिल्लाका बासिन्दाका लागि १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको १० लाख ६५ हजार ४ सय १७ कित्ता सेयर निश्कासन गर्ने भएको छ । लमजुंग जिल्लास्थित चिटी, धोदानी, बन्सार, नौथर, सिमभञ्ज्यांग, अर्चलबोट गाविसका बासिन्दाका लागि ५ लाख ३२ हजार ७ सय ८ कित्ता र जिल्लाबासीका लागि...
६ करोडको आइपीओमा साढे ५ अर्बको आवेदन !
काठमाण्डौ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्सको आइपीओमा मागभन्दा १०१ गुणा बढी आवेदन परेको छ । एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ६ लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन गरिएकोमा ५ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको आवेदन परेको हो । आइपीओमा बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको नवील इन्भेष्टमेन्ट बैकिङका अनुसार देशभरका संकलन केन्द्र तथा आस्वा...